लागु पदार्थ सेवन तथा वेचविखनको अभियोगमा मलेसियामा दुई नेपाली पक्राउ ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
लागु पदार्थ सेवन तथा वेचविखनको अभियोगमा मलेसियामा दुई नेपाली पक्राउ ?
मलेसियामा लागु पदार्थ सेवन तथा वेचविखनको अभियोगमा मलेसियामा दुई नेपाली पक्राउ परेका छन । पक्राउ पर्नेमा म्याग्दिका २२ वर्षिय नरेश सुवेदी र रौतहटका २७ वर्षिय उत्तम दर्लामि रहेका छन ।
पोटकेलाग नजिककै बङ्सापुरिमा रहेको एक इलेक्टोनिक कम्पनीमा कार्यरत उनीहरुलाई कम्पनीकै होस्टलवाटै समातिएका हुन । पहिले देखि नै उक्त स्थानमा गतिविधि भैरहेको थाहा पाएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई समातेको उल्लेख गरिएको छ । स्थानिय प्रहरीले घटनाकाको वारेमा थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
नेपालीको लागि अब यसकारण असुरक्षित भए कतार साउदी र मलेसिया
नेपाली युवाहरुका लागि साउदी अरब, कतार र मलेसिया असुरक्षित देश रहेको पाइएको छ । एक आर्थिक वर्षमा मलेसिया र खाडी राष्ट्र साउदी अरब र कतारमा आठ सय ८० जना नेपाली युवाले ज्यान गुमाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा साउदी अरबमा तीन सय ६२ जना (महिला दुई जना), मलेसियामा दुई सय ८० जना (महिला एक जना) र कतारमा दुई सय ३९ जना (महिला दुई जना) युवाहरुले ज्यान गुमाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक हजार दुई सय ४२ जना (महिला २९ जना) युवाले विदेशमा ज्यान गुमाएको मध्ये करिब ९० प्रतिशत युवाले मलेसिया र खाडीका छ राष्ट्रमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई)मा दुई सय आठ जना (महिला १२ जना), कुवेतमा ५५ जना (महिला तीन जना), बहराइनमा ३१ जना (महिला दुई जना) र ओमानमा सात जना युवाले ज्यान गुमाएका छन् ।
मलेसिया र खाडी मुलुक आप्रवासी कामदारको लागि जोखिम मुलुकको रुपमा छन् । ती मुलुकहरुमा कार्यस्थल सुरक्षित तथा व्यवस्थित नहुँदा समेत नेपालीहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
आप्रवासी श्रमिकहरुलाई लिएर अपर्याप्त कानुन र कानुन कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यसको मारमा नेपाली युवा(कामदार)हरु पनि पर्छन् । अर्कोतर्फ नेपाली युवाहरु मलेसिया र खाडी छ राष्ट्रहरुमा असुरक्षित समेत रहँदै आएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनअनुरुप कतारमा आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएको खण्डमा उचित कानुनी उपचार समेत नहुने गरेको उल्लेख गरेको छ ।
– यो समाचार आजको आर्थिक दैनिकमा छापिएको छ ।